Google AdWords Policy - Tevedzera Iwo Mitemo!
Mugovera, Kubvumbi 30, 2011 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Chris Bross
Wako mameseji kushambadza akave asingatenderwe nekuda kwemapepanhau kana trademak kutyora? Kana iwe ukaita zvese nenzira kwayo, nei uri kupopoterwa neGoogle?
AdWords haimbokuzivisa iwe ipapo, kuwanda kwemavara kushambadza kuti uongorore kamwechete. Ivo vane maalgorithms avo anozoona yako yemavara kushambadzira kana iwe watyora mutemo wavo. Iko kubatika kunogara kuri mushure mechokwadi uye pasina ruzivo rwakawanda kuti sei. Zvinoshungurudza kwazvo!
Ehe unogamuchira email ine hushamwari kubva kuLPQ-Support@Google.com ine mutsara wenyaya; Akaundi yako yeGoogle Ads ine kukanganisa kwakawanda! Usaregeredza iyi email, nekuti AdWords inodzima account yako kana kutyora kuri kuenderera. Nzira yakanakisa yekudzivirira kushushikana kwemoyo, uye nguva yekudzora account, ndeyekunyatsonzwisisa Google Ads Policy.
At EverEffect, isu tine rombo rakanaka kuve neyedu yataimbove Googler senge superstar sosi patinoda kubata neAdWords Policy. Pazasi pane mamwe matipi anofanirwa kuve epamusoro epfungwa kune ese ePPC nyanzvi.
Sisitimu Yekuchinja Log
AdWords ine mavhoriyamu pamusoro pezvikamu zvese zvepasirese uye nyika-yakatarwa marongero anotonga mhando dzese dzekushambadzira dzinopihwa. Wedzera kune izvo chokwadi chekuti mutemo unoshanduka kazhinji kuitira kuti urambe uchifamba neyakaipisisa yeiyo indasitiri. Munyika yedu yanhasi yevakuru, hazvingave zvinonakidza here kana iwe ukagona kuisa scrolling yekuzivisa system mubrowser yako iyo inogona kukuchengetedza iwe uchiziviswa nezvekushambadzira mutemo shanduko sezvazvinoitika? Fembera chii: Google ine chimwe chinhu chinotonhorera. Inonzi iyo Sisitimu Yekuchinja Log, uye kana usati watoziva nezvayo ndinokurudzira zvikuru kuwedzera bhukumaki.
Iyo peji rinonyora kushambadzira mutemo shanduko sezvavanowanzoitika, kana kunyangwe zvishoma pamberi pekutanga kwavo. Nekuzviita tsika yekutarisa izvi nguva nenguva, unogona kugara kumberi kwekakona uye kudzivirira kushambadza kubva pasi nekuda kwekuchinja kusingatarisirwi muAdWords Policy.
Factor Policy Nyaya mune yako PPC Game Chirongwa
Chinokosha ndechekuti udzidze maitiro ekugadzirisa matambudziko emitemo, kuagadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona, nekugadzirisa account yako kuitira kudzivirira kushambadza kubva pasi pasi mune ramangwana.
Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiita chero PPC kuvandudza account, haufanire kugaya ako ese kushambadza uye kuatsiva neatsva kunze kwekunge iwe wagadzirira kuwana zvese kunze kwekomisheni kwechinguva chidiki.
Kunzwisisa izvi, pamwe nekuti mashambadziro mazhinji achazoda kuitiswa ongororo usati waita mukana wekumhanya, unofanirwa kutarisira kuti panogona kunge paine nguva yepasi (pamwe nekuda kwekuongorora kana kusagamuchira kushambadzira) shambadziro dzako nyowani dzisati dzatanga kune kugona kwavo kuzere. Saka, kana iwe usiri kuda kumisa kushambadza kwako kwese, chinhu chakangwara kuita ku chengeta shambadziro dzako dzazvino shambadziro kumusoro apo iwe uchiita account yako 'kugadzirisa.'
Zvakareruka, asi zvinoshamisa kuti kunakidzwa kwekushambadzira kushambadzira kunogona kukonzera hiccups kana anonyanya kushinga PPC account maneja 'chitubu chinosuka' zvese nekukurumidza.
MuUS, chinhu chekutanga kucherechedza nezveAdWords Trademark Policy ndechekuti icho inongotonga zvinyorwa zveshambadziro, uye haina kukanganisa mazwi akakosha. Sezvo ivo vachitaura kazhinji, Google inoshuvira kubvumidza vashambadziri rusununguko rwakawanda sezvinobvira mukusarudzwa kwemazwi avo, uye sekudaro muUS havatarise mazwi anozivikanwa mumazwi akakosha. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uri muridzi wechiratidzo uye wakatsamwiswa kuti kushambadzira kwemukwikwidzi kuri kuoneka kana nguva yako yekutengesa yaiswa mubhawa rekutsvaga reGoogle - ndine hurombo, wapererwa nemhanza.
Mubvunzo unotevera kupindura ndewokuti maGoogle anotarisa sei zviratidzo muzviratidzo zvekushambadzira. Kana iwe usati wanyoresa zita rako rekutengeserana neGoogle uye ukakumbira kuti vatarise, chiratidzo chako hachiongororwe. Nguva! Nekuda kweizvo zvandinofungidzira kudzikisira zviwanikwa, Google haitsvage zvine mutsindo mazwi ekuti uchengete pafaira yekutarisa, nekudaro unofanirwa kuendesa chichemo cheTM kuti utange maitiro ekutarisa.
Chinhu chega chasara izvozvi ndechekuti uve nechokwadi chekuti iwe unokwesha yako AdWord Policy maererano neFarmaceuticals Indasitiri. Iyi yakanyanya kuomarara uye inokodzera yayo yega posvo… ramba wakatarwa!
Tags: google adwordsgoogle adwords mutemoPima CP
Jul 18, 2011 na2:14 PM
Ndangoverenga chinyorwa ichi mangwanani ano. Ndinoda kugovera ruzivo rwangu kubva svondo rapfuura neGoogle, uye ndinzwe kana paine akambova nezvakadai zvakaitika kwavari…
Ini ndiri mutsva kubasa iri, ndangoshanda nguva yakazara ikozvino kwemavhiki maviri (chikamu chenguva kwemwedzi miviri zvisati zvaitika). Ndakawana chimiro che "munhu akakodzera" kubva kuGoogle svondo rapfuura.
Vhiki rapfuura mushure mekutamba vachitenderedza marongero avo echiratidzo chenguva yandanga ndichishanda pano, ndakasvika pakutyora. Ndakarambwa zviziviso zvitsva zvakati zvanga zvisina kusiyana zvakanyanya mukushandisa kwavo mazwi echiratidzo pane mamwe ads anga atotenderwa. Ndakatumira email, ndichikumbira kutsanangurirwa kuti sei ma ads aya asina kutenderwa asi mamwe anga asina kunaka.
Sezvawakataura nezve mazwi akakosha, manzwisisiro angu ndeyekuti mazwi makuru inyaya yakaparadzana kubva kune ad zvinyorwa. Asi pandakagamuchira mhinduro kubva kuGoogle maererano nemubvunzo wangu, hezvino zvavakataura kwandiri nezve mamwe mazwi akakosha andaive nawo mumapoka aya ad:
"Mamwe emazwi akakosha akadzika vhoriyamu yekutsvaga uye aya anogona kukanganisa sarudzo yekupedzisira pane ako ads, saka, ini ndinokurudzira kuti ubvise aya mazwi akakosha kubva pane yako keyword list."
Pandakanyora zvakare kuti ndikumbire kujekeserwa pamusoro penyaya iyi uye vaigona here kundinongedzera kune zvinhu zvandaigona kuverenga kuti ndibatsire kudzivirira dambudziko mune ramangwana, havana kubatsira. Ndakaudzwa kaviri kuti ndibvise yakaderera vhoriyamu yekutsvaga makiyi uye ndimise mazwi akamira akamira sezvo aya dzimwe nguva aikanganisa kubvumidzwa kwead. Sei?
Apr 18, 2012 pa 1: 34 PM
Yangu Google Adwords account yanga isingashande kwerinenge gore. Asi ndakazoisa madhora gumi muakaundi yangu yeadwords, ndakagadzira ad yewebhusaiti yangu nyowani. Uye zuva rakatevera Google yakamisa account yangu. Ndakavatumira email ndikavabvunza kuti sei vakaimisa, uye vakanyora vachipindura vakati havana kukwanisa kuimisa, uye vakandipa kuziva chikonzero nei. Ndakaverenga yavo advertising policy etc., uye hapana chandinoona chakaipa nead yangu kana webhusaiti. Shambadziro yacho inobatanidza zvakananga kune peji rangu rekutengesa, uye ndiri kutengesa zvigadzirwa zvakatendeseka zvinondidyira zviuru zviviri zvemadhora kuti zvigadziriswe nevagadziri vepurogiramu. Zvichida Google Adwords haichabvumiri vanhu kubatanidza kune peji rekutengesa? Handikwanise kuziva izvi. Ndakasanganisira mutengo wechigadzirwa changu muAd saka vanhu chete vaikwanisa kuitenga ndivo vaidzvanya link. Mutengo uri muAd wakamisa account yangu here? Izvi zvinovhiringa kuedza kuzvinzwisisa. Ndinogona kukanzura account, kurasikirwa ne$10, ndotanga neaccount nyowani. Asi maererano nemashoko anoti kana account ikamiswa chero mamwe maakaundi matsva andinogadzira achamiswa zvachose, uye handichakwanisa kushambadza navo zvakare. Izvi zvinovhiringa.
Mar 27, 2014 pa 10: 20 AM
Iwe uri 100% chokwadi nezve kushandisa yakanangwa ad kopi uye kiyi yechimiro - isu tine mutengi mumotokari matayi / marimu bhizinesi uye kazhinji inenge yakareba muswe kwavari ine chaiwo radius uye vhiri hupamhi saizi kuita chaizvo muunganidzwa. Kana iwe uchida kuti nditarise account yako ndofunga mamwe mazano nditumire email pa simon.b@resultsdriven.org. kana isu tinogona kuseta kufona nekukurumidza kana uchida foni 302-401-4478.